Muxuu hoggaanka ONLF ka yiri go'aankii Xukuumadda Rooble? | KEYDMEDIA ENGLISH
Hoggaanka ONLF ayaa markii ugu horreysay ka hadlay, qaraarkii xukuumadda xil-gaarsiinta ay shalay ururkaas uga saartay liiska argagixisada, oo ay kal hore galisay xukuumaddii kheyre.
MUQDISHO, Soomaaliya- Hoggaanka ururka gobanimo-doonka Soomaaliyeed ee ONLF, ayaa soo dhaweeyey tallaabadii ay xukuumadda Rooble uga saartay liiska argagixisada, ee ay ururkaasi sanadkii 2017-kii galisay xukuumaddii uu hoggaaminayey Kheyre.
Cabdiqaadir Caddaani Hirmooge, oo ah afhayeenka ururka, ayaa warbaahinta u sheegay muddo dheer ay sugayeen go'aanka gollaha xukuumadda Soomaaliya, wuxuu ku macneeyey arrin amaan mudan, oo kaalin weyn ka qaadanayesa halgankooda gobonimo-doonka ah.
Wuxuu sheegay in go'aankii shalay uu qiimo weyn uu ugu fadhiyo shacabka soomaaliyeed, isagoo xusay in ururkooda ay hormuud u yihiin halgan gobonimo-doon ah, kaas oo mudan in loo muujiyo garab istaag dhab ah.
Wuxuu sidoo kale soo dhaweeyey go'aankii ay gollahu ka qaateen dhiibistii C/kariin Qalbi dhagax, taas oo ay gollaha wasiirada Soomaaliya sheegeen in ay ka hor imaaneysay qoddob ka mid ah dastuurka dalka.
Go'aankii gollaha wasiirada ee shalay, ayaa bar madow ku noqday xukuumadii kheyre, taas oo ururka gobanimo-doonka ee ONLF u aqoosantay 2017-kii urur aragagixiso ah, iyagoo Qalbi dhagax u gacan galiyey dalka Itoobiya.